နမ့်ခမ်းမြို့မှာ မိသားစုလိုက် ရောင်းစားခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ် - Real Gaming Myanmar
နမ့်ခမ်းမြို့မှာ မိသားစုလိုက် လူကုန်ကူးမှု အဖြစ် ရောင်းစားခံရ….. ။ ။ ။
မေ ၁၇ မူဆယ်
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ၊ မိုင်းယုလေးရွာတွင် နေထိုင်သည့် သားမိ လေးယောက်ကို နမ့်ခမ်းမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် လီမိန်းကျိန်း ဆိုသည့် အမျိုးသမီးမှ ဦးဆောင်ပြီး တရုတ်ပြည်သို့ လူကုန်ကူး အဖြစ် ရောင်းစားခဲ့ တာကြောင့် …… ကျူးလွန်သူ လေးဦးကို မိသားစုဝင်များ က သတင်း ရရှိပြီး ပြည်သူစစ်များ အကူအညီနှင့် ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း မိသားစုဝင်များထံမှသိရသည် ။
“ ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ သူ့အမေကို ရောင်းစားလိုက်တာ ….. ဒီနှစ် နှစ်လပိုင်း ကပါ သူအဖေကအလုပ်သွား နေတာ အိမ်မှာ မရှိဘူး ….အခု ရောင်းစားခံရတဲ့ သားမိ သုံးယောက်က ကျနော် တူရဲ့ မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေပါ ….. ။
ရောင်းတာတော့ သားမိ လေးယောက်လုံး ရောင်းတာ သားအငယ် နှစ်ယောက်နဲ့ သူအမေကိုပဲ တရုတ်တွေက ဝယ်တယ်တဲ့ သမီးအကြီးလေးကို မဝယ်တော့ ရောင်းစားတဲ့ သူတွေက နမ့်ခမ်းပြန်ပို့ထားလို့ အခုလို ဖမ်းမိတာပါ ” ဟု ရောင်းစားခံ သူ၏ ဦးလေး ဖြစ်သူက ပြောသည် ….. ။
ရောင်းမရလို့ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကလေးကို ရောင်းစား သူတွေရဲ့ အိမ်မှာ ထားပြီး ဝယ်သူမရှိသေးလို့ အခုလိုကျန်နေတာ ပါသွားတဲ့ ကလေး နှစ်ယောက် ကတော့ သေလားရှင်လား စုံစမ်း မရသေးဘူး ….. ကျန်ခဲ့တဲ့ ကလေးက စိတ်ဒဏ်ရာ ရပြီး ကြောက်လန့်နေတယ် ….ပြီးတော့ နည်းနည်းလည်း ကြောင်သလို ဖြစ်နေတယ်
သူတို့ ဆေးတွေဘာတွေ တိုက်ထားလားလည်းမသိဘူး။ ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည် …. ။ရောင်းစားခံရသည့် ကလေးအမေမှာ အသက် (၃၀) ဝန်ကျင်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ကလေး ယောက်ကျာင်္းလေး နှစ်ယောက်မှာတော့ လေးနှစ်ကျော် တစ်ယောက် တစ်နှစ်ကျော်တစ်ယောက်နဲ့ မရောင်းရသေးပဲကျန်နေခဲ့ သမီးအကြီးမှာ ခုနှစ်နှစ်ဖြစ်သည်။
လူကုန်ကူးခံရသူများကို တရုတ်နိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ ထိန်ချုံးမြို့မှာ ရောင်းစားခဲ့ကြောင်း ဖမ်းဆီးရမိသည့် လူကုန်သူမူကျူးလွန်သူများက ဝန်ခံပြောဆိုသည် ….. ။
ယခု ပြစ်မူကျူးလွန်များကို ပန်းဆေးပြည်သူ့စစ်ဌာနချုပ်၏လက်အောက်ခံ နမ့်ခမ်းမြို့ပေါ်မှ ပြည်သူ့စစ်ကသုံးရက်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားသည့် အချိန်တွင် ကျူးလွန်သူ အမျိုးသမီး တစ်ဦးထွက်ပြေးသွားပြီး …..ကျန်ရှိသည့် သုံးဦးကို ယနေ့မေလ (၁၇)ရက်တွင် နမ့်ခမ်း မြို့မ ရဲစခန်းကိုသွားရောက်အပ်နှံမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး ပစ်မူကျူးလွန်သူများသည်။ အမျိုးသမီး သုံဦး အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်သည် ….. ။
သတင်း/ဓာတ်ပုံ / by- လီရှောမျိုးဆက် #Kan Baw Za
နမျ့ခမျးမွို့မှာ မိသားစုလိုကျ ရောငျးစားခံရတဲ့ ဖွဈရပျ
နမျ့ခမျးမွို့မှာ မိသားစုလိုကျ လူကုနျကူးမှု အဖွဈ ရောငျးစားခံရ….. ။ ။ ။
မေ ၁၇ မူဆယျ
ရှမျးပွညျနယျ မွောကျပိုငျး၊ ကှတျခိုငျမွို့နယျ ၊ မိုငျးယုလေးရှာတှငျ နထေိုငျသညျ့ သားမိ လေးယောကျကို နမျ့ခမျးမွို့နယျတှငျ နထေိုငျသညျ့ လီမိနျးကြိနျး ဆိုသညျ့ အမြိုးသမီးမှ ဦးဆောငျပွီး တရုတျပွညျသို့ လူကုနျကူး အဖွဈ ရောငျးစားခဲ့ တာကွောငျ့ …… ကြူးလှနျသူ လေးဦးကို မိသားစုဝငျမြား က သတငျး ရရှိပွီး ပွညျသူစဈမြား အကူအညီနှငျ့ ဖမျးဆီးရမိကွောငျး မိသားစုဝငျမြားထံမှသိရသညျ ။
“ ကလေးနှဈယောကျနဲ့ သူ့အမကေို ရောငျးစားလိုကျတာ ….. ဒီနှဈ နှဈလပိုငျး ကပါ သူအဖကေအလုပျသှား နတော အိမျမှာ မရှိဘူး ….အခု ရောငျးစားခံရတဲ့ သားမိ သုံးယောကျက ကနြျော တူရဲ့ မိနျးမနဲ့ ကလေးတှပေါ ….. ။
ရောငျးတာတော့ သားမိ လေးယောကျလုံး ရောငျးတာ သားအငယျ နှဈယောကျနဲ့ သူအမကေိုပဲ တရုတျတှကေ ဝယျတယျတဲ့ သမီးအကွီးလေးကို မဝယျတော့ ရောငျးစားတဲ့ သူတှကေ နမျ့ခမျးပွနျပို့ထားလို့ အခုလို ဖမျးမိတာပါ ” ဟု ရောငျးစားခံ သူ၏ ဦးလေး ဖွဈသူက ပွောသညျ ….. ။
ရောငျးမရလို့ ကနျြခဲ့တဲ့ ကလေးကို ရောငျးစား သူတှရေဲ့ အိမျမှာ ထားပွီး ဝယျသူမရှိသေးလို့ အခုလိုကနျြနတော ပါသှားတဲ့ ကလေး နှဈယောကျ ကတော့ သလေားရှငျလား စုံစမျး မရသေးဘူး ….. ကနျြခဲ့တဲ့ ကလေးက စိတျဒဏျရာ ရပွီး ကွောကျလနျ့နတေယျ ….ပွီးတော့ နညျးနညျးလညျး ကွောငျသလို ဖွဈနတေယျ
သူတို့ ဆေးတှဘောတှေ တိုကျထားလားလညျးမသိဘူး။ ဟု ၎င်းငျးကဆကျပွောသညျ …. ။ရောငျးစားခံရသညျ့ ကလေးအမမှော အသကျ (၃၀) ဝနျကငျြရှိပွီဖွဈပွီး ကလေး ယောကျကြာင်္းလေး နှဈယောကျမှာတော့ လေးနှဈကြျော တဈယောကျ တဈနှဈကြျောတဈယောကျနဲ့ မရောငျးရသေးပဲကနျြနခေဲ့ သမီးအကွီးမှာ ခုနှဈနှဈဖွဈသညျ။
လူကုနျကူးခံရသူမြားကို တရုတျနိုငျငံ၊ ယူနနျပွညျနယျ၊ ထိနျခြုံးမွို့မှာ ရောငျးစားခဲ့ကွောငျး ဖမျးဆီးရမိသညျ့ လူကုနျသူမူကြူးလှနျသူမြားက ဝနျခံပွောဆိုသညျ ….. ။
ယခု ပွဈမူကြူးလှနျမြားကို ပနျးဆေးပွညျသူ့စဈဌာနခြုပျ၏လကျအောကျခံ နမျ့ခမျးမွို့ပျေါမှ ပွညျသူ့စဈကသုံးရကျကွာ ထိနျးသိမျးထားသညျ့ အခြိနျတှငျ ကြူးလှနျသူ အမြိုးသမီး တဈဦးထှကျပွေးသှားပွီး …..ကနျြရှိသညျ့ သုံးဦးကို ယနမေ့လေ (၁၇)ရကျတှငျ နမျ့ခမျး မွို့မ ရဲစခနျးကိုသှားရောကျအပျနှံမညျဖွဈကွောငျး သိရပွီး ပဈမူကြူးလှနျသူမြားသညျ။ အမြိုးသမီး သုံဦး အမြိုးသားတဈဦးဖွဈသညျ ….. ။
သတငျး/ဓာတျပုံ / by- လီရှောမြိုးဆကျ #Kan Baw Za
Previous: Puppey ရေးတဲ့ပန်းချီကားတိုင်းကို အသက်ဝင်အောင်လုပ်ပေးနိင်သူ MidOne ရဲ့အကြောင်း
Next: “သင့်မွေးရက်က ပြောတဲ့ သင့်အကြောင်း” (အရမ်းမှန်လွန်းပါတယ်)